Ka fakar yar
Ka fakar yar waxay u heellan tahay horumarinta daryeelka tayada leh iyo waxbarashada carruurta ee sanadaha ugu muhiimsan. Adoo xoogga saaraya dadka waaweyn ee nolosha carruurta - waalidiinta, xirfadlayaasha caruurnimada hore, iyo siyaasiyeyaasha - Ka fikir waayo-aragnimooyinka yar yar ee carruurta ka caawiya inay koraan. Barnaamijka Waxbarashada & Waxbarashada McKnight Foundation wuxuu diiradda saarayaa akhris-qoraalka hore iyo kordhinta boqolleyda ardayda akhriska ah ee heerka fasalka saddexaad. Iyadoo laga faa'iideysanayo McKnight, Think Small waxay awood u laheyd inay la shaqayso Reading Corp si ay u keento barnaamijkooda akhris-qoraalka ah ee akhris-qoraalka ee xanaanada cunugga.
Ka fikir macalimiinta yaryar waxay leeyihiin xiriir adag, xiriir shakhsiyadeed oo leh bixiyeyaasha xanaanada cunugga qoyska. Cilaaqaadyadani waa kuwa ugu muhiimsan ee iskaashiga u dhexeeya Minnesota Reading Corps iyo Fikrada Yar, oo albaabka u furay bixiyeyaasha ku yaal Minneapolis ' Aagga Aagga Aagga Waqooyi iyo Saint Paul Promise Neighborhood inuu ku biiro tijaabada. Xubnaha Akhriska Qoraallada hadda waxay booqdaan barnaamijyada xannaanada carruurta ee qoyska laba illaa seddex jeer toddobaadkii, taasoo keentay in ay kor u qaadaan akhriska iyo sameynta waxqabadyo yaryar oo kor u qaada xirfadaha hore ee qorista. Iyadoo bixiyayaashu ay eegayaan, waxay bartaan oo ay bilaabaan in ay isku daraan dhaqdhaqaaqyadaas isla markaana ay ku noqdaan maalin kasta. Ka fikir macalimiin yar oo buuxiya wareegga taageerada, xoojinta farsamooyinka farsamooyinka ay barteen. Hadafku waa in bixiyeyaashu ay si buuxda ugu kalsoonaadaan oo ay kalsooni ugu qabaan barashada hore ee akhris-qoraalka kadib laba sano. Iminka sanadka labaad, Think Small wuxuu ku daray isku-duub cusub oo labanlaabay tirada bixiyeyaasha ku lug leh.
Sannadka ugu horreeya ee carruurta barnaamijka ku jira ayaa horumaraya. Barnaamijyada qaarkood ayaa hore u lahaa 80% ilaa 100% afar-iyo shan-sano jir ayaa loo tixgeliyey "farac ka yimid bartilmaameedka" oo ku saabsan jilitaanka iyo isuduwidda. Iyadoo loo marayo wada-shaqeynta "Small Small and Reading Corp", tirooyinkaas hadda waa la duubay, iyadoo 80% illaa 100% midkood "kudhow bartilmaameedka" ama "ama ka sarreeya" bartilmaameedka akhriska. Carruurtani waxay hadda ku jiraan wadada loo diyaarinayo xanaanada.